Myanmar Digital Rights Forum 2019: What do you want to discuss? – Free Expression Myanmar
Oct 18, 2018 by Coordinator	in News သတငျး
The Myanmar Digital Rights Forum 2019 will be held on 18-19 January 2019.
We want to design the MDRF based on what you want and in the format that you prefer.
We would like to hear from you what you would like to discuss or know more about. Please fill out this form to help us shapeabetter MDRF.
We haven’t opened the applications to register yet so please stay tuned.
#DigitalRightsMM is organised by FEM, MCRB, MIDO, and Phandeeyar.
မန်မာဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကို ၁၈ ရက် နဲ့ ၁၉ ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉ မှာ ကျင်းပသွားမယ့်အကြောင်းကို သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ့ရက်တွေကို မှတ်ထားပေးဖို့အတွက်လည်း အသိပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးစေချင်တယ်ဆိုတာကို တက်ရောက်ချင်တဲ့ လူတွေဆီကနေ သိချင်ပါတယ်။ ဒီဖောင်ကို ဖြည့်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု ဖြစ်လာအောင် ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်။
စာရင်းပေးဖို့အတွက်တော့ လျှောက်လွှာမဖွင့်သေးတဲ့အတွက် စောင့်မျှော်ပေးပါကြပါဦး။
မွနျမာဒဈဂဈြတယျအခှငျ့အရေးဆိုငျရာဆှေးနှေးပှဲကို ၁၈ ရကျ နဲ့ ၁၉ ရကျ ဇနျနဝါရီ ၂၀၁၉ မှာ ကငျြးပသှားမယျ့အကွောငျးကို သတငျးကောငျးပါးလိုကျပါတယျ။ အဲဒီ့ရကျတှကေို မှတျထားပေးဖို့အတှကျလညျး အသိပေးလိုကျပါတယျ။
ဆှေးနှေးပှဲမတိုငျခငျမှာ ဘယျလိုအကွောငျးအရာတှကေို ဆှေးနှေးစခေငျြတယျဆိုတာကို တကျရောကျခငျြတဲ့ လူတှဆေီကနေ သိခငျြပါတယျ။ ဒီဖောငျကို ဖွညျ့ပွီး ပိုကောငျးတဲ့ ဆှေးနှေးပှဲတဈခု ဖွဈလာအောငျ ကူညီပေးစခေငျြပါတယျ။
စာရငျးပေးဖို့အတှကျတော့ လြှောကျလှာမဖှငျ့သေးတဲ့အတှကျ စောငျ့မြှျောပေးပါကွပါဦး။
Read the recommendations from the 2018 MDRF participants >>
Tagged with: 66(d) ၆၆(ဃ), Digital rights, MDRF, Privacy, Surveillance, Telecommunications Law ဆကျသှယျရေးပုဒျမ